Papiasy avy any Hierapolisy - Wikipedia
I Papiasy avy any Hierapolisy na Papiasy dia eveka tao Hierapolisy (any Frigia) tamin'ny antsasany voalohany amin'ny taonjato faha-2. Ataon'ny Katolika ho "olon-tsambatra" izy ka ankalazaina ny fahatsiarovana azy isaky ny 22 Febroary. Atao hoe Παπίας / Papias izy amin'ny teny grika. Niaina tamin'ny taona 60 hatramin'ny taona 163 izy.
Nanoratra ny boky hoe Λογίων Κυριακῶν Ἐξήγησις / Logiôn Kuriakôn Eksêgêsis ("Fanazavana ny tenin'i Tompo") izay fitambarana boky dimy izy. Izany asasoratra izany dia very ka ampahan-dahatsoratra vitsy no mbola hita ao amin'ny soratr'i Ireneo avy any Logdanoma (taona 180) sy ao amin'ny soratr'i Eosebio avy any Kaisarea (taona 329). Loharano momba ny lovantsofin'ny Kristiana voalohany io asasoratr'i Papiasy io, indrindra fa ny niavian'ireo Filazantsara kanonika.
Araka an'i Ireneo dia nihaino ny toriteny nataon'i Joany Apostoly i Papiasy sady sakaizan'i Polikarposy avy any Smirna. I Eosebiosy kosa dia milaza fa nino ny Fanjakana arivo taonan'i Kristy i Papiasy.
Klemento avy any Roma,
Papiasy avy any Hierapolisy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Papiasy_avy_any_Hierapolisy&oldid=977599"
Dernière modification le 23 Novambra 2019, à 12:57
Voaova farany tamin'ny 23 Novambra 2019 amin'ny 12:57 ity pejy ity.